နောက်ဆုံး Open Qualifier4မှာ အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ Yangon Galacticos – Gaming Noodle
DPC SEA Open Qualifier4မှာတော့ မြန်မာအသင်းတွေထဲက YG, No Grim, Burmese Ghoul တို့ ဟာ နောက်ဆုံး အခွင့်အရေးအဖြစ် ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ No Grim နဲ့ BG ဟာ Open Qualifier ပြိုင်ပွဲမှာပဲ ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ YG အသင်းအနေနဲ့တော့ Open Qualifier4မှာ Dream Team, Interactive PH, Sincerely ly, Bangkok Dynamo, Lilgun အသင်းတို့ကို အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး Open Qualifier4မှာ တက်မယ့် သုံးသင်းထဲ ပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ (ပုံမှန် Qualifier တစ်ခုမှာ နှစ်သင်းပဲဆိုပေမယ့် Q3 မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အသင်းတစ်သင်းက DQ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဒီနေ့ Q4 မှာ သုံးသင်းရွေးချယ် ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်)
Credit: YG Facebook
YG အသင်းအနေနဲ့ ရှေ့က ကစားခဲ့တဲ့ Q1, Q2, Q3 တို့က အမှားတွေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာ သူတို့ရဲ့ ကစားကွက်ကို အကောင်းဆုံး ပုံဖော်ကစားနိုင်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ Lilgun ဟာ Open Qualifier 1 မှာ YG အသင်းကို round of 32 မှာ အနိုင်ရရှိထားတဲ့ အသင်းတစ်သင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bo1 ဖြစ်တာနဲ့အညီ တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ draft တွေကိုလည်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ခက်တဲ့ YG အသင်းအနေနဲ့တော့ တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ early pushing lineup မှာ တိုင်ပတ်ပြီး Draft အကွာနဲ့ပဲ အရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး hero တွေလို့ဆိုရမယ့် Lycan, Brood တို့ကို ban ခဲ့တာဟာလည်း YG အသင်းအတွက် ဆော့ရတာ အတော်လေပေါ့ပါးပြီး အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ Semifinal ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ YG အသင်းနဲ့ Lilgun တို့ရဲ့ ပွဲသုံးသပ်ချက်လေးကိုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
YG အသင်းအနေနဲ့ Tiny, Grimstroke, Puck, Morphling, Pangolier တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး Lilgun အနေနဲ့တော့ Lion, Beastmaster, Dark Willow, Templar Assassin, Monkey King တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Draft အနေအထားအရတော့ Lilgun ဟာ အနည်းငယ်ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။
Puck ဟာ အစောပိုင်းမှာတင် Tiny ရဲ့ bottle refills, ganking အကူအညီတွေနဲ့ပဲ တစ်ဖက်အသင်းက TA ကို အတော်လေး အသာစီးရခဲ့ပါတယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက်ထိ နှစ်သင်းလုံးဟာ Hero Kills ငါးကောင်စီနဲ့ မျှနေခဲ့ပြီး team networth ဟာလည်း less than 1k လောက်ထိပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း battle တွေမှာတော့ Lilgun အသင်းက supports တွေဖြစ်တဲ့ Lion နဲ့ Dark Williow ဟာ Dream Coil တစ်ခုနဲ့ပဲ ဘယ်လိုမှ position ယူလို့မရခဲ့ဘဲ battle အစတွေမှာတင် သေနေခဲ့ပါတယ်။
၁၈ မိနစ်မှာလောက်မှာပဲ နှစ်သင်းလုံးရဲ့ 5men smoke ganking မှာတော့ YG အသင်းဟာ3men Dream Coil နဲ့အတူ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး TA တစ်ယောက်ပဲ လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ battle နိုင်သွားတာတစ်ခုနဲ့ပဲ YG အသင်းဟာ roshan ရယူခဲ့ပြီး ပွဲကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Aegis နဲ့အတူပဲ Enemy အသင်းရဲ့ အလယ်လမ်း 1st tower, အပေါ်လမ်းရဲ့ 2nd Tower နဲ့ အောက်လမ်းရဲ့ 1st, 2nd, 3rd towers တွေကိုပါ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 3rd tower ယူအပြီးမှာတော့ aegis ကုန်မယ့် အချိန်စောင့်ပြီး smoke နဲ့ highground vision အပိုင်ရယူပြီး battle ပြန်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ battle ပါ ထပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အောက်လမ်း mega တစ်လမ်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
YG အသင်းကတော့ လုံး၀အမှားမခံတော့ဘဲ map controls အသာနဲ့ပဲ Lilgun ဘက်ကို ဦးဆောင်ပြီး နောက်ထပ် roshan ကို စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ Farming space တွေကျဉ်းသွားတဲ့ Lilgun ကတော့ neutral items(tier 3) တွေရှာပြီး Roshan ထွက်မယ့်အချိန် နောက်တစ်ခါ smoke နဲ့ comeback point ရှာဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ Pangolier တစ်ကောင်ထဲနဲ့ပဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Lilgun ဘက်က positions တွေ အားလုံးကို YG က တွေ့သွားခဲ့ပြီး Lilgun အနေနဲ့ Team wipe ပါ ဖြစ်သွားတဲ့အထိ အရေးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။ Roshan ထပ်ယူပြီး highground တက်လာချိန်မှာတော့ Lilgun ဟာ ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်တော့ဘဲ ၃၂ မိနစ်မှာပဲ YG အသင်းကို အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။
YG အသင်းကတော့ Open Qualifier4မှာ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီး Close Qualifier Stage2ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Close Qualifier Stage2မှာတော့ Group B ထဲ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Army Geniuses, Assault, Omega, SMG, ZeroTwo တို့နဲ့ group stage မှာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (Team Cow ဟာ ZeroTwo နာမည်ပြောင်းခဲ့သလို၊ Team Void ဟာလည်း Assault နာမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်)
Open Qualifier2မှာ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တဲ့ X.Veteran အသင်းကတော့ Group A ထဲမှာ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Cignal Ultra, Galaxy Racer, Hoyo, The Prime, Lilgun တို့နဲ့ group stage A မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအသင်းတွေထဲကမှ Qualified ဖြစ်သွားတဲ့ X.Veteran နဲ့ YG အသင်းတို့ Group Stage တွေမှာလည်း အကောင်းဆုံး လက်စွမ်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် . . .
Photos Credit to Yangon Galaticos Facebook